Taorian'ny sakafo maraina dia niala tao Kovalam ary hijery ny Hotel. Manana fahafinaretana eny amoron-dranomasin'i Kovalam. Fialam-boly amin'ny hariva. Fialantsasatra alina ao amin'ny KOVALAM.
Taorian 'ny sakafo maraina dia niala tao Kanyakumari (80 kms. / 2 Hrs.). Mankanesa any Palmanabhapuram Palace ary mandefa mankany amin'ny hotely. Fitsidihana an-toerana mankany Gandhi Mandapam, Vivekananda Memorial ary mankafy ny filentehan'ny masoandro amin'ny hariva. Fijanonana israelita any KANYAKUMARI.
Ny maraina dia mifaly amin'ny fiposahan'ny masoandro. Taorian'ny sakafo maraina dia miala ao Trivandrum (95 kms. / 2.5 Hrs.) Famindrana any amin'ny Hotel. Famangiana ao an-toerana Sri Padmanabha Swamy Temple, Museum Napier sy Zoo. Fijanonana israelita any TRIVANDRUM.